I-Lubuntu 21.10 inyukela kwi-LXQt 0.17.0 kwaye igcina iFirefox kwi-APT | Ubunlog
ILubuntu 21.10 inyukela kwi-LXQt 0.17.0, Qt 5.15.2 kwaye igcina ingxelo ye-DEB yeFirefox
IPablinux | 14/10/2021 20:19 | Lubuntu, Ubuntu
Phakathi kwezinto ezintsha ze Ubuntu 21.10 Kukho into abanye abasebenzisi abangayi kuyithanda. I-Canonical isusile ugcino (DEB) uguqulelo lweFirefox ukubandakanya iphakheji yayo emiselweyo. Nangona besinokwaliwa, esi sigqibo besingafani nesiSitolo se-Snap; Kule meko yayiyiMozilla eyayiphakamisayo, kwaye inkampani eyayiqhutywa nguMark Shuttleworth yamkela. Kwakunganyanzelekanga kwezinye iincasa, ke ILubuntu 21.10 Ikhutshiwe ngale mvakwemini kwaye uthathe isigqibo sokugcina ingxelo yakudala efanayo.
Ewe kunjalo, njengoko bechazile kwamanye amanqaku okukhutshwa, kwaye ukuba akukho nto itshintshayo kwiinyanga ezintandathu ezizayo, kwi-22.04 zonke iincasa ze-Ubuntu kufuneka zisebenzise i-snap version yeFirefox ngokungagqibekanga. Umxholo webrawuza owahlukileyo, uLubuntu 21.10 ufikile ngezinto ezintsha ezinje ngemeko yemifanekiso, I-LXQt 0.17.0 ngeli xesha. Iya kusebenzisa i-kernel efanayo kwaye iya kuxhaswa kwangaxeshanye namanye amalungu e-Impish Indri yosapho.
Amagqabantshintshi eLubuntu 21.10
Ixhaswe iinyanga ezili-9, de kube nguJulayi 2022.
I-LXQt 0.17.0 -ngokuphuculwa okuninzi ngaphezulu kwe-0.16. Apha kukho ulwazi oluthe kratya.
LXQt Archiver 0.4.0 esekwe kwi-Engrampa, ngoku ifakiwe.
IMozilla Firefox iya kuthumela njengephakheji ye-Debian enenguqulo ye-93.0 kwaye iya kufumana uhlaziyo kwiqela lokhuselo Ubuntu kubo bonke umjikelo wenkxaso yokukhutshwa. Ukuba abazitshintshi iingqondo zabo, kwiinyanga ezintandathu kuya kufuneka batshintshe basebenzise uguqulelo olungapheliyo lwe-snap. Ngokungafaniyo neChromium, iFirefox kulindeleke ukuba ihlale ifumaneka njengephakheji ye-DEB ngaphaya kotshintsho.
Indawo yeLibreOffice 7.2.1.
I-Featherpad 0.17.1, yamanqaku kunye nokuhlelwa kwekhowudi.
Fumanisa iZiko leSoftware 5.22.5, ngendlela elula kunye negraphical yokufaka kunye nokuhlaziya isoftware.
ILubuntu 21.10 isungulwe ngokusesikweni kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo. Imifanekiso emitsha ye-ISO iyafumaneka kwiwebhusayithi yeprojekthi, okanye ngokunqakraza apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Lubuntu » ILubuntu 21.10 inyukela kwi-LXQt 0.17.0, Qt 5.15.2 kwaye igcina ingxelo ye-DEB yeFirefox
IBrython, iPython 3 yokumiliselwa kwenkqubo yewebhu esecaleni yabathengi
Ubuntu Studio 21.10 ngoku iyafumaneka ngePlasma 5.22.5, iLinux 5.13 kunye nokuhlaziywa kwezicelo zemultimedia